Tag: maaraynta macaamiisha | Martech Zone
Tag: maaraynta macaamiisha
Salonist waa software saloon ah oo ka caawiya isboortiga iyo goobaha lagu qurxiyo maareynta mushahar bixinta, biil bixinta, la macaamilka macaamiishaada, iyo fulinta xeeladaha suuqgeynta. Astaamaha waxaa ka mid ah: Dejinta Balanta ee Spas iyo Salons Online Booking - Adoo adeegsanaya softiweerka ballan qaadka ee Salonist Online, macaamiishaadu way jadwal sameyn karaan, dib u dhigan karaan, ama ka noqon karaan ballamaha meel kasta oo ay joogaan. Waxaan leenahay labadaba degel iyo karti adeeg oo lagu dhex biirin karo maareynta warbaahinta bulshada ee Facebook iyo Instagram. Tan awgeeda, gebi ahaanba geeddi-socodka ballansigu waa gebi ahaanba
Jaanis: Dhismaha Websaydhka Dhamaystiran ee Ecommerce
Talaado, Janaayo 12, 2021 Talaado, Janaayo 12, 2021 Douglas Karr
Mashruuca 'Volusion's all-in-one platform' ayaa fududeynaya in dukaankaaga lagu dejiyo daqiiqado. Mashruucoodu wuxuu sahlayaa in la maamulo dukaankaaga, la aqbalo bixinta kaararka deynta, alaabada la dhigo ama la cusbooneysiiyo naqshadeynta goobtaada. Mashruucooda ecommerce wuxuu awood u siinayaa iibiyeyaasha inay kacaan oo ay la socdaan istcimaalo adeegsade heer sare ah iyo astaamo waaweyn. Tilmaamaha Qalabka Dhismaha ee 'Volusion's Ecommerce Builder': Tifatiraha Bakhaarka - U habee muuqaalka iyo dareemka bartaada mawduucyo si xirfadaysan loo qaabeeyey iyo tifaftiraha boggeena xoogga leh.
Suuq-geynta Wareegga Suuq-geynta Ganacsiga Yaryar
Arbacada, Agoosto 22, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Shirkadeena tikniyoolajiyadeena, Formstack (oo loogu talagalay dhismaha foomka khadka tooska ah), oo laga dhisay waxyaabo badan oo la taaban karo oo bixiya hagitaan ku saabsan istaraatiijiyadaha iyo qalabka ganacsiga yar yar ay ka faa'iideysan karaan Mid kasta oo ka mid ah qalabka waa mid qiimo ku fadhiya oo si fudud loo isticmaali karo. Sameynta istiraatiijiyad suuqgeyn ayaa noqon karta mid adag. Nasiib wanaag, Sanduuqa Qalab ee Wareegga Suuqgeynta Ganacsiga Yaryar ayaa kaa caawinaya inaad hagaajiso nidaamka, dhammaan intaad bixinaysid qalab caan ah oo kuu oggolaanaya inaad si fiican u hesho oo u maamusho macaamiishaada. Raac tilmaamaha
Wareejinta ChaCha ee Mobile-ka waxay ahayd mid dhalaalaya
Thursday, April 10, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Aniga (iyo kuwa kaleba) weligay si dhab ah uma fahmin ChaCha. ChaCha waa halyeey ku dhashay Indianapolis waxayna heshay tan maalgelin ah gadaasheeda. Waan fahmi waayey sababta qof ugu tuurayo lacag mashiinka baadi-goobka aadanaha ku shaqeeya. Waxaan u maleynayay inay aad u kheyraad badan tahay isla markaana waqti lumis ah… lagu xukumay dhimasho dhibic. Waan qaldamay ChaCha waxay samaysay wax aan aad ula yaabay. Way ogaayeen waxa ay ku fiicnaayeen - baaris sax ah